Bandhigga Muusikada ee SOLOTÜRK wuxuu joojiyaa Neefsashada Samsun | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir55 SamsunSOLOTÜRK Duulimaadyada Dalxiiska ee Samsun Goosta Neefta
20 / 05 / 2019 55 Samsun, SAWIRADA, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY
samsunda soloturk ruzgari ayaa ku dhacay
19 Munaasabada Ataturk Mayga, Isboortiga Dhallinyarada iyo Maalmaha Isboortiga ee Samsun ayaa isugu keenay shirkii gobolka.
Gazi Mustafa Kemal Ataturk iyo askartiisa la socday waxay u tageen Samsun si ay u bilaabaan Dagaalka Qaranka. xafladaha waxaa lagu qabtay Samsun gudaheeda hawlaha sanadka. Dhammaan hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed, wasiirrada iyo wakiillada siyaasadeed ayaa ka qaybgalay xafladaha halkaas oo farriinta midnimada iyo midnimada. Munaasabadda, shir-guddoonka gobolka ayaa markii ugu horreysay ku kulmay Munaasabada Maajo ee 100 ee Samsun.
xafladda Ra'iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan, hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Guddoomiyaha MHP Devlet Bahçeli, Madaxweyne ku-xigeenka Fuat Oktay, Wasiirka Difaaca Qaranka Hulusi Akar, wasiirka caddaaladda Abdul Hamid Gul, Dhaqanka iyo Wasiirka Dalxiiska Mehmet Ersoy, Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan, Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turan, Qoyska, Wasiirka shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zumrut Selcuk, Warshadaha iyo Wasiirka Technology Mustafa Varank, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Chief of General Shaqaalaha Gen. Yasar Güler, Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Felicity aasaasiga ah Karamollaoğlu, Guddoomiyaha BBP Mustafa Destici, Guddoomiyaha DSP Önder Aksakal, Madaxweynaha Waddanka Waddani Ibrahim Ibrahim, Guddoomiyaha Watan Party East East Perinçek, Samsun Guddoomiye Cusmaan Kaymak, Guddoomiye Mustafa Demir, xubno ka tirsan baarlamaanka, wakiillada xisbiyada iyo kumanaan muwaadiniin ah ayaa ka soo qayb galay.
Dibadbaxyada SOLOTÜRK ayaa joojiyay neefsashada
Munaasabadda, oo lagu qabtay Isku-xidhka Taleex ee Salvation Road, ayaa bilaabay ardayda akhrinaya gabayada 19 May. Kadib, wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayaa hadal u jeediyay. Ka dib markii uu hadal ka jeediyay Kasapoğlu kooxdan Ciidamada Xoogga Turki ee Mehteran waxay muuqatay marxaladdana ku heesatay. Ka dib markii kooxda Mehter ay ku guuleeysteen hawada sare ee Turkiga ee SOLOTÜRK duulimaadyo banaan. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa raacay dhaqdhaqaaqa jilicsan ee diyaaradaha duulimaadka. Ka dib markii SOLOTÜRK show ka gobolladiisa Turkey iyo 81 10 markab Istanbul Piri Reis 'in dalal kala duwan laga bilaabo 100 ah. Dhallinyarada da'doodu u dhaxayso Samsun ee sanadka soo bandhigay calanka Turkiga waxay la keeneen iyaga iyo dhulalkooda ku yaala goboladooda si ay u siiyaan madaxweynaha Erdogan. Later, Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa hadal u jeediyay. Kadib hadalkii uu jeediyay Madaxweyne Erdogan, xafladdii ayaa ku dhamaaday sawir wada jir ah oo hogaamiya xisbiyada siyaasadeed.
10 waxay ku biirtay kumanaan
Munaasabado iyo bandhigyo ayaa soo jiidatay xiiso weyn. Muwaadiniinta ka kala yimid daafaha dalka oo dhan iyo Samsun dadka degan xafladaha. Ataturk Boulevard waxaa lagu xiray gaadiidka, taraamada ayaa lagu qasbay in ay soo jiidaan daadad bini'aadan. Dadka aan raaci karin taraamka sababtoo ah xoojinta xad-dhaafka ah waxay ahayd inay lugta ku socoto hawlaha magaalada.
Mountaineers dhaawaca jimicsiga badbaadinta ayaa joojiya neefta
neefta Turkey Mountain Bike Championship la jaray
Waxaa lagu soo bandhigay tareenka Nostalgic ee ka socda Archers
Bus iyo tareen tuugo ayaa gubay ka dib markii ay dawladu ka dhacday magaalada Athens
23 Muuqaal Muuqaal Muuqaal Bishii Abriil ee Gebze K @ Biin
SOLOTÜRK Booqashada Kayseri
Mucjisada SOLOTÜRK ee Kayseri Maanta oo ah 15.00
Xirfadlayaasha Warshadaha Oo Doonaya Inay Joojiyaan Isgoysyada Ankara-Samsun Road
Jimicsiga nabdoonaanta shaqada ee Bosphorus Bridge
SOLOTÜRK duullimaadyo muujinaya